MAHAFINY FlightPort Cessna U206G Soloy Mark 1 FSX & P3D
Tena antsipiriany add-on ho an'ny Cessna U206G Soloy MK1, dia misy modely enina samihafa (anisan'izany ny Skydive sy ny dikan-javatra miaraka amin'ny floats) sy ny atiny maromaro. Mody modely tanteraka amin'ny 3D, gauche tena ao amin'ny 3D, feo namboarina, soratra amin'ny famaritana avo, manual ampiasaina amin'ny PDF. Aza adino noho izany lehibe add-on izay iray amin'ireo tsara indrindra ao Rikoooo, misaotra an'i Thomas Roehl mpanoratra.
Hafatra manan-danja: XMLTools dia tsy maintsy apetraka mba hahatonga ny fitondran-tenan'ilay motera ho azo tanterahina. Safidio azafady, avy eo ampidino ary apetraho ny kinova XML Tools ho an'ny Flight Simulator anao amin'ny fanarahana ity rohy ity (Raha efa napetraka ao amin'ny Flight Simulator anao ny Tools XML dia azonao atao ny tsy miraharaha an'ity hafatra ity): https://www.fsdeveloper.com/forum/members/taguilo.1802/#resources
Ny Garmin afovoany dia mora mihodina amin'ny kodiarana maimaim-poana - ny kofehy dia manify, ary mitohy mihodina. Ireo izay tsy manana kodiarana maivana, dia afaka miditra amin'ny bokotra ankavia izy ireo amin'ny fanindriana imbetsaka ao amin'ny C-knob ary mavo. Miverina miasa miaraka amin'ny bokotra ankavanana.